फेसबुके लवको भरोसा गर्दा सुनिताले जीवन पनि डुबाईन भएको रु १ करोड पनि गुमाइन (भिडियो) - Social Video Khabar
फेसबुके लवको भरोसा गर्दा सुनिताले जीवन पनि डुबाईन भएको रु १ करोड पनि गुमाइन (भिडियो)
दुई वर्ष अघि सुनिता काफ्ले ‘२८’ सिंगापुरमा थिइन् । अनविटन समीर नामक फेसबुक आइडीबाट उनलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट गयो । उनले स्वीकार गरिन् । फेसबुकमा अनविटन समीर भनिने भैरहवाका समीर हुसैन मुसलमान रहेछन् । दुवैले एक अर्कोसँग फेसबुकमा कुराकानी गर्न थाले । आत्मियता बढ्दै गयो । त्यसको केही समयपछि सुनिता नेपाल आइन् । समीरसँग भेट भयो । उनीहरु प्रेममा परिसकेका थिए । धर्मले दुईलाई रोक्न सकेन । भेटकै क्रममा समीरले सुनितालाई औपचारिक प्रेम प्रस्ताव गरे । सुनिताले बाबुको उपचारमा व्यस्त छु भनिन् । त्यो क्रममा सुनिताका पिताको स्वर्गवास भयो । समीरसँग फेरि भेट भयो । समीरले फेरि सम्बन्धमा बस्न आग्रह गरे । सुनिताले पनि स्वीकार गरिन् ।
विस्तारै माया गाढा हुँदै गयो । धेरै गाढा माया हुँदा मन मात्रै साटिएन तन पनि साटियो । सुनिताको दावीअनुसार उनीहरुले दक्षिणकाली मन्दिरमा गएर विवाह गरे । यद्यपि समीर पिताले उनीहरु व्यापारिक पार्टनर मात्रै रहेको जानकारी दिएका छन् ।
‘विवाह’ पछि दुवै सँगै बस्न थाले । सुनिताका अनुसार हनिमुनका लागि नगरकोट गए । मुक्तिनाथसम्म संस्कारगत कामका लाग पुगे । डिजी हब भन्ने कम्पनीमा समीर संलग्न थिए । सिंगापुर हुँदै सुनिताले समीरलाई पैसा पठाइन् । डिजी हबमा पार्टनर छुट्टिए । त्यसपछि सुनिता र समीर ढल्कुमा रहेको अपार्टमेन्टमा बस्न थाले । सुनिताले पनि बुढानिलकण्ठमा रहेको घर छाडिन् । आमा बाबु गुमाइसकेकी सुनितालाई पनि कसैको जरुरत थियो । उनले समीरसँगै अपार्टमेन्टमा बस्न थालिन । सुनिताको भनाइअनुसार उनीहरु त्यो अपार्टमेन्टमा दुई वर्ष बसे । छिमेकीहरुले उनीहरुलाई पतिपत्नीकै रुपमा चिन्ने गर्थे ।
त्यही रहँदै दुवैले ‘वस्त्र नेपाल’ नामक अर्को फर्म खोलेर व्यापार गर्न थाले । त्यो व्यापारले पनि सुनितालाई डुबायो । त्यहाँ सुनिताको ५०– ६० लाख डुब्यो । सुनिताले सम्बन्ध पतिपत्नीको भए पनि विवाह दर्ता भएको थिएन । उनले विवाह दर्ता गर्न दबाब दिइन् । तर समीरले मानेनन् । समीरले आफ्ना साथीहरुलाई ‘सुड्डीलाई पट्याएको छु, भन्दै मेसेज पठाएको देखिन् ।’ त्यसपछि समीरले सुनितालाई छाडेर भैरहवा गए । सुनितालाई छाडे ।
त्यसपछि सुनिता कानुनी उपचारतर्फ लागिन् । त्यो भन्दाअगाडि गौशाला प्रहरीमा उजुरी लिएर पुगिन् । समीरसँगको मायाप्रेमको तस्वीरुहर सुनिताले सार्वजनिक गरिन् । प्रहरीले त्यस्ता तस्वीर देखेपछि समीरलाई दबाब दियो । त्यसपछि नयाँबजार प्रहरीमा उनीहरुबीच छलफल भयो । महिला सेलमा भएको छलफलमा समीरले सुनितालाई श्रीमती भएको मौखिक स्वीकार गरे । तर पनि विवाह दर्ता हुन सकेन । किनभने त्यसपछि समीर भागे ।
सुनिताको भनाइअनुसार समीरसँगको सम्बन्धका कारण उनको करिब १ करोड सकियो । उनीसँग अहिले पनि आफ्नो लागि पुग्ने सम्पत्ति छ । समीरले धोका दिएको दावी सुनिताको छ । अब उनले समीरको पत्नी कायम र अंशमुद्धाको दावी गर्दै आएकी छन् ।
यससम्बन्धमा समीरका पिता साहेब हुसैनले यसबारे बोल्दै भने, ‘यो विषय कानुनी मामिला बनेको छ । समीर र सुनिता बिजनेस साझेदार हुन् । पतिपत्नी होइनन् ।’
Prevहृदयघात र क्यान्ससँग लड्ने क्षमता विकास गर्ने फलफूल, जानकारीकाे लागि शेयर गराै है
Nextविवाहितभन्दा अविवाहित युवतीहरुको गर्भनिरोधक चक्की लिन आउने बढी संख्या
रबिलामिछानेको अर्को रुप भनेर चिनिएका एक अशक्त युवा यस्तो काम सम्म गर्छन ! सलुट छ हजुरलाई ! सधै यसरीनै अगाडी बढ्नु होला ! आउनुहोस सबैले हेरौ भिडियो
दोलखा भीमसेनको दर्शन गरि आजको राशिफल हेर्नुहोला, भेटी स्वरुप एक सेयर गरौ !
किन प्रयोग गरिन्छन “सेक्स टोयज”? तपाईलाई थाहा छ ?
यौन सम्पर्कपछि महिलाले सोच्ने १२ कुराहरु जुन तपाई सुनेर अचम्मित पर्नुहुनेछ